बालुवाटारकै बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली नबसेपछि नेताहरू असन्तुष्ट
बालुवाटारकै बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली नबसेपछि नेताहरू असन्तुष्ट बामदेवलाई चुनाव लड्न ओलीको पुनः प्रस्ताव
वीरेन्द्र ओली शनिबार, असार १३, २०७७, २३:१४
अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिमा स्थायी कमिटी बैठक संचालन गर्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड। तस्बिर : सूर्य थापा।
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै सहज हुने गरी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै राखियो। स्थायी कमिटी बैठक पार्टी कार्यालयमा धुम्बाराहीमा राख्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आउनजान असहज हुने भएकाले प्रधानमन्त्री निवासमै स्थायी कमिटी बैठक राख्ने निर्णय भएको थियो। तीन दिनसम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली एकदिन मात्रै पूरा समय बस्न भ्याए। शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठक हलमा प्रवेश नै गरेनन् भने शनिबार करिब ५ मिनेटको हाराहारीमा मात्र बसेर प्रधानमन्त्री बाहिरिए।
स्थायी कमिटी बैठक शुरु भएपछि बुधबार अध्यक्ष ओलीले सबैभन्दा पहिले डेढ घण्टासम्म लामो मन्तव्य राखेर अरु नेताहरुलाई सुनाएका थिए। अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले एक घण्टा भन्दा लामो मन्तव्य राख्दा समेत ओलीले सुनेरै बसे। अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले आफ्ना मन्तव्य सकेलगत्तै शुक्रबार पुनः बैठक निरन्तर हुने गरी बुधबारको स्थायी कमिटी बैठक सकियो।
एक दिन 'ग्याप' राखेर शुक्रबारको बैठकमा सरकारको समीक्षा गर्ने एजेन्डा राखेर छलफल गर्ने भनिएको भएपनि एकाएक प्रधानमन्त्री ओली 'गायब' भए। बैठकको तेस्रो दिन पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली ५/७ मिनेट मात्रै बसेर सन्चो नभएको भन्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए। आफूले बोल्दा ठिकठाक हुने प्रधानमन्त्री ओली अरुले बोल्दा कहिले बिरामी, त कहिले कार्यव्यस्तता देखाएर बैठकबाट निस्कन थालेपछि स्थायी कमिटी नेताहरुसमेत आश्चर्यमा पर्न थालेका छन्।
शनिबारको बैठकमा ५/७ मिनेट बसेपछि प्रधानमन्त्री ओली सन्चो नभएर बैठक हलबाट बाहिर गएको अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटी नेताहरूलाई जानकारी दिएका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यू अरु स्थायी कमिटी नेता कमरेड आउँदा बैठक हलमा आइसक्नु भएको थियो। बैठक सुरु भएपछि यस्तै ५/७ मिनेट जति बस्नु भयो होला। अनि हलबाट बाहिर जानुभयो,’ स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन् ‘प्रधानमन्त्री ज्यू हलबाट बाहिर गएपछि अर्का अध्यक्ष (प्रचण्ड)ज्यूले सन्चो नभएर निस्केको जानकारी दिनुभयो।’
यसअघि पनि बैसाख २४ गते स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गर्ने एजेन्डाका विषयमा छलफल गर्न बोलाएको सचिवालय बैठकमा आफू थाकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली हलबाट बाहिरिएका थिए। सचिवालय बैठकमा 'एक व्यक्ति, एक पद', दललाई फुटाउन सजिलो हुने गरी ल्याइएका अध्यादेशलगायत विषय स्थायी कमिटीमा एजेन्डा बनाएर छलफल गर्नुपर्ने नेताहरूले उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओली बैठक छोडेर निस्किएका थिए।
बैठकबाट निस्केर कहाँ गए ओली?
प्रधानमन्त्री ओली बैठक हलबाट निस्किएलगतै आइतबार पर्ने जननेता मदन भण्डारीको ६९औँ जन्मजयन्तीको भिडियोको तयारीमा लागेको बालुवाटार स्रोतले जनकारी दिएको छ। ‘आइतबार मदन भण्डारीको जन्मजयन्ती भव्य रूपमा मनाउने निर्णय भएको छ। त्यसका लागि केही भिडियोहरू सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘बालुवाटारको एउटा भवनमा बैठक चल्यो। अर्को भवनमा प्रधानमन्त्रीज्यू मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीसम्बन्धी भिडियोको तयारीमा लाग्नुभयो।’ मदन जन्यन्ती र असार १५ धान दिवस मनाउने भन्दै २ दिन स्थायी कमिटी बैठक स्थागित गरिएको छ।
बैठकमा विविध विचार आउँदा आलोचनासमेत हुनसक्ने भएकाले बिरामी भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले बहाना गर्ने गरेको स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले बताइन्। ‘आफूले बोल्दा प्रधानमन्त्रीज्यू ठिकठाक हुनुहुन्छ। अरुले बोल्ने भनेपछि बिरामी भईहाल्नुहुन्छ। उहाँ (प्रधानमन्त्री) बिरामी हो/होइन, हामीले जान्ने कुरा भएन,’ शाक्यले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अरुको कुरा सुन्नै मन पर्दैन। अरुले गरेको आफ्नो आलोचना त झन् पटक्कै सुन्नुहुन्न।’
प्रधानमन्त्री ओलीले बिरामी भनेर बैठकबाट निस्किएको विषयमा समेत शाक्यले आशंका व्यक्त गरिन्। ‘प्रधानमन्त्रीज्यू एमाले अध्यक्ष हुँदादेखि नै बैठकमा छलफल गर्ने विचारविमर्श गर्ने खालको स्वभाव नै थिएन,’ शाक्यले भनिन्, ‘नेकपा स्थायी कमिटीमा नेताहरूले एउटै खाले धारणा सबैले राख्ने कुरा भएन। कसैले आलोचना पनि गर्नुहोला। त्यो उहाँ(प्रधानमन्त्री)ले सुन्न सक्न सक्नुभएन। बैठक छोडेर हिड्नुभयो।’ पार्टीमा विचारविमर्श र संगठनबाट प्रधानमन्त्री नआएकाले पार्टी बैठकलाई बुझ्नै नसक्ने शाक्यको आरोप छ।
गिरिजाबाट सिक्दै ओली!
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले समेत अप्ठ्यारो पर्दा बिरामी भएको बहाना बनाउने गरेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए। ‘मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि केपी ओलीसम्मको क्याबिनेट फेस गरेको छु,’ ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘आफूलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो कि आज अलि सन्चो छैन। भोलि छलफल गरौँला भनेर उम्कन्थे।’ राष्ट्रको जिम्मेवारी बोकेका नेताले आफूले नसक्दा लिसो टासिए जस्तै टासिनु नहुने ति स्थायी कमिटी सदस्यले बताए।
‘गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुदा अप्ठ्यारो पर्‍यो भने जवाफ दिन नसक्ने भयो भने लौ रामचन्द्रजी मिलाउनु होला। मलाई अलि सन्चो भएन भन्थे,’ ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ’केपी ओलीको क्याबिनेटदेखि पार्टी बैठकसम्म फेस गर्दा उनै गिरिजाप्रसादको सम्झना हुन्छ।’ त्यतिमात्र होइन, कतिपय अवस्थामा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाभन्दा पनि एक स्टेप अघि छन्। कोइराला आफ्नो क्याबिनेटका मन्त्रीअनुकुलका कर्मचारी भएर आफूअनुकुल नभए पनि खासै चासो नराख्ने स्वभावका भएको तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूअनुकुल कर्मचारी सेटिङ गरेर मन्त्रीलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरेको ती स्थायी कमिटी नेताको ठहर छ।
नेताहरुको वर्ग विभाजन देखिने थलो
स्थायी कमिटी बैठकमा कतिपय नेताहरू अगुवापछुवा सुरक्षाकर्मी लिएर तामझामका साथ बालुवाटर प्रवेश गर्ने गरेका छन्। कतिपय नेताहरू सहकर्मी नेताकै गाडीमा खाँदिएरै भएपनि बैठकमा सहभागी हुन पुग्ने गरेका छन्। कतिपय नेताहरू भने बालुवाटारको बैठक सकेर पैदल यात्रामा नै घर फर्कने गरेका छन्। एउटै पार्टी र एउटै कमिटीका नेताको समेत फरकफरक जीवनशैलीको दृश्य बालुवाटारमा देखिने गरेको छ। सवारीमा देखिएको वर्ग विभाजनको दृश्य बैठक हलमा समेत पुग्न थालेपछि नेताहरुले चर्को विरोध गरेका छन्। शुक्रबारको बैठकमा भीम रावलले अध्यक्षको कुर्सी र अरु स्थायी कमिटीको कुर्सी फरक भएको भन्दै विरोध गरेका थिए। अध्यक्षद्वयको कुर्ची राजामहाराजाको जस्तो भएको र अरु सदस्यको कुर्ची रैतिजस्तो भन्दै आलोचना गरेपछि सबै नेताहरूको कुर्सी एउटै भएको थियो।
शनिबार रघुवीर महासेठ बैठक हलमा प्रवेश गरेपछि बुधबारकै बैठकको जस्तै विभेदको विषय उठ्यो। बैठक कक्षमा प्रवेश गर्नुअघि मन्त्री र सचिवालय सदस्यलाई स्क्रिनिङ गर्ने तर अन्य नेताहरू स्क्रिनिङ नगरिने व्यवस्था गरिएको थियो। यसको विरोधमा महासेठले प्रश्न उठाए। बैठकको सुरुमा नै महासेठले यस्तो प्रश्न उठाएका थिए। संयोगले प्रधानमन्त्री ओली पनि बैठक हलमा नै थिए। विरोध सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै गेटदेखि हलसम्म सबैलाई समान व्यवहार हुने व्यवस्था गरिने जवाफ दिएपछि बैठक हल शान्त भएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए।
बामदेवले भने- महाकाली सन्धि सच्याइयोस्
शनिबार स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भयो भन्दा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै अब न्याय गरिनुपर्ने बताए। बैठकमा बोल्दै गौतमले महाकाली सन्धिमा महाकाली सन्धिलाई लिएर एमाले विभाजन भई माले भएको प्रसंग जोडेर अब न्याय गरिनुपर्ने माग राखेका हुन्। ‘एकीकृत महाकाली सन्धि हुँदा संसदमा भोट क्रसिङ भयो। पार्टी विभाजन भयो,’ गौतमको भनाई उदृत गर्दै एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘महाकाली सन्धि हुँदा त्यो बेला पढेको थिएन। तत्कालीन समयमा पार्टीका महासचिव रहेका नेता माधवकुमार नेपालले ठीक छ भनेपछि सहमत भएँ। अन्तमा महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भयो भन्ने भएपछि पार्टी विभाजनसम्म पुग्यो।’ हिजो आफूले जुन कुरा उठाउँदा कारबाही भयो, त्यो सच्याउनु पर्ने गौतमको माग छ। ‘महाकाली सन्धिमै महाकाली नदीको उद्गमथलो टुङगो लगाइएन। त्यो टुंगो नलाउँदा भारतसँग सीमा विवाद बल्झिँदै गयो,’ ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘आज त्यही महाकाली सन्धिमा त्रुटि हुँदा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्र समेटर नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने अवस्था आइपुग्यो।’
शनिबारको बैठकमा सीमा समस्या र समाधानबारेमा देवेन्द्र पौडेल, रघुवीर महासेठ, सुवास नेम्वाङ, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल, टोपबहादुर रायमाझी, रघुजी पन्त, सत्यनारायण मण्डल, युवराज ज्ञवाली, नन्दकुमार प्रसाईं, प्रदीप ज्ञवाली, बामदेव गौतम, योगेश भट्टराई, पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, ईश्वर पोखरेल, विष्णुपुकार श्रेष्ठ, मणि थापा, घनश्याम भुसाल, शक्ति बस्नेत र डा. पुष्प कँडेलले आफ्ना विचार राखेका थिए।
बामदेवलाई सांसद बनाउन ओलीको फेरि प्रस्ताव!
पार्टी सचिवालयदेखि स्थायी कमिटीसम्म अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई सांसद बनाउने प्रस्ताव पुनः दोहोर्‍याएका छन्। बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकपछि बिहीबार अध्यक्ष प्रचण्डसँगै बालुवाटार पुगेका गौतमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन लड्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
‘पहिलो दिनको बैठकपछि प्रधानमन्त्रीसँग अध्यक्ष प्रचण्ड र वामदेव गौतमजी हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूले वामदेवजीलाई निर्वाचन लड्नुस् कहाँबाट लड्नुहुन्छ आफै खोज्नुस् भन्नुभयो। बामदेवजीले कसलाई भन्नुभएको भनी प्रतिप्रश्न गर्नुभयो। त्यसको उत्तरमा प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईंलाई भन्या। सुन्नु भएन भनी पुनः प्रश्न गर्नुभएको थियो,’ सो छलफलमा सहभागी पार्टीका एक नेताले भने, ‘तपाईं (ओली)ले मात्रै होइन, अब दुवै अध्यक्षले भनेपनि निर्वाचन लड्दिनँ भनेर बामदेवजीले उत्तर दिनुभयो। यदि यो प्रस्ताव पार्टीमा कमिटीमा लगेर निर्णय गराएपनि निर्वाचन लड्दिनँ भन्नुभयो।’
बामदेव गौतमले उल्टै प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिएर बाटो खाली गर्न आग्रह गरेको छलफलमा सहभागी ती नेताको भनाइ छ। जवाफमा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर देखाउन चुनौती दिएको उनले उल्लेख गरे।
कर्णालीको विवाद कर्णालीमै
'कर्णाली विद्रोह'लाई काठमाडौंले सल्टाउने
एकताको ६ महिनापछि सांगठनिक एकता र कार्यविभाजनमा जुट्दै जसपा
मुकेश चौरासियाको हत्याका दोषीमाथि कारबाही गर्न प्रचण्डद्वारा सरकारसँग माग सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पर्साका मुकेश चौरसियाको हत्याको दोषीमाथि कारबाही गर्न सर... आइतबार, कात्तिक ९, २०७७
कांग्रेसले यस वर्ष चियापान समारोह नगर्ने विस २०३३ सालमा बिपी कोइराला राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्केपछि २०३४ सालदेखि प्रत्येक वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमाको दि... आइतबार, कात्तिक ९, २०७७
सुवास नेम्वाङको दशैं सम्झना- गोरेबहादुरको हप्की हरेक वर्ष याद आउँछ २०५९ सालको दशैँ नेम्वाङको अविष्मरणीय दशैँ हो। त्यो साल पनि नेम्वाङ फूपूको घरमा टीका लगाउन गएका थिए। टीका लगाएर सपरिवार टेलिभिजन हेर्... आइतबार, कात्तिक ९, २०७७
नेपाल लाइभ कोरोना अपडेट [२०७७-०७-०९] आइतबार, कात्तिक ९, २०७७
नेपाल लाइभ समाचार [भिडियो] आइतबार, कात्तिक ९, २०७७
सय वर्ष पुरानो मस्जिदमा डोजर चलाउने दुई जना पक्राउ शनिबार, कात्तिक ८, २०७७